हाम्रो संविधान आर्गनिक होइन, हाइब्रिड हो : एमाले नेता पोखरेल | TAJBIJ.COM
हाम्रो संविधान आर्गनिक होइन, हाइब्रिड हो : एमाले नेता पोखरेल
July 20, 2016 तजबिज खबर	Leaveacomment
बागलुङ, २०७३ साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विरुद्ध माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव संवैँधानिक रुपमा ठिक भएपनि राजनीतिक रुपमा गलत छ । संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा दलहरु सत्ता लालचमा लागेर संविधान निर्माणको गतिलाई पर धकेल्ने काम यसले भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्छ, कानुन नबनी निर्वाचन हुन सक्दैन र निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन यस्तो समयमा सरकार परिवर्तनको खेल सर्वथा लगत हो भन्ने मलाई लाग्दछ । २०७४ माघ सम्म समयसिमा भएको संसदले धेरै गर्नु पर्ने अवस्थामा राजनीतिक रुपमा दलहरुले जे गरिरहेका छन् त्यसले संविधान कार्यान्वयनलाई अलमलाउने र अस्थिरता कायम राख्नेको शुरुवात भएको छ ।
राजनीतिक दलहरु कहिले काही संवैधानिक विषयमा आलटाल गर्ने र गैर राजनीतिक सरकार बनाउने खेलहरु हुने गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका एक नेताले गैरराजनीतिक सरकारको कुरा चर्चामा ल्याएका छन् । त्यसतर्फ दलहरु जानु हुदैन । संवैधानिक रुपले अगाडि बढ्नका लागि दलहरुबीच समन्वय आवश्यक छ ।
यतिबेला वर्तमान सरकारका विरुद्ध अविश्वास ल्याउनुका चार कारण छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । पहिलो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, दोस्रो वर्तमान सरकारले सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको साथमा गरेको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने, प्रधानमन्त्रीले चिनसंग गरेका महत्वपूर्ण सम्झौताको कार्यान्वयन नगराउने र वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति जनताले देखाएको अभूतपूर्व समर्थनलाई सहन नसकेको परिणाम स्वरुप अविश्वास प्रस्ताव आएको छ ।
यो देशमा २०४६ सालको परिवर्तन पछि ८० प्रतिशत सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले ग¥यो, १५ प्रतिशत एमालेले र अरु ५ प्रतिशत अन्यले नेतृत्व गरेका छन् । ८० प्रतिशत सत्ता नेतृत्व गरेको पार्टीले खडा गरेको कर्मचारी प्रशासनमा १५ प्रतिशत नेतृत्व गरेको एमाले समर्थक कर्मचारी संगठनले दुइ तिहाई स्थानमा विजय प्राप्त गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु तिलमिलाएर सत्ता परिवर्तनमा लागेका हुन् । अब निर्वाचन भयो भने एमालेले सोलो डोलो पार्छ भन्ने चिन्ताका कारण केपी ओली सरकार हटाउन ठुलो मेहेनत गरेर गठबन्धन गराएको स्पष्ट छ । यो गठनबन्धन राष्ट्रको नेतृत्व गर्न, संविधान कार्यान्वयन गर्न र मंसिरमा तोकिएका निर्वाचन नगर्नका लागि बनेको हो, यो सर्वथा अस्वभाविक र जनहित विपरित पजल हो ।
जहाँसम्म सरकार अल्पमतमा परेको कुरा छ, धेरैले भन्ने गरेका छन्, अल्पमतमा परेपछि राजिनामा गरे भइहाल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टसंग भन्नु भएको छ, कि यो सरकार संसदले बनाएको हो, संसदले जे भन्छ म त्यही गर्छु, नेकपा एमालेले संंसदले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । बाहिरबाट आदेश दिएका भरमा राजिनामा दिइदैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि राजिनामाको कुनै अर्थ हुदैन । अविस्वास प्रस्ताव र राजिनामा संगसंगै हुन सक्दैन । संसदमा परिपक्क निर्णय हुन्छ, बाहिर हुने निर्णय अस्थिर हुन्छ, मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने पक्षमा म छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ । संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न एमाले प्रतिवद्ध छ । संसदमा परिपक्क निर्णय हुन्छ, बाहिर हुने निर्णय अस्थिर हुन्छ, मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने पक्षमा म छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ । संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न एमाले प्रतिवद्ध छ र त्यसका लागि अरुले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
अविश्वास प्रस्तावका बारेमा नेपाली कांग्रेसले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन खोजेको देख्दा अचम्म लागिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा राजिनामा दिएको हो की ? संसदमा फेस गरेको हो ? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विगत सम्झनु पर्छ, बहुमतलाई वेवास्ता गर्नेले अल्पमतले गरेको अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्छु भनेर केपी ओलीले भन्दा नैतिकताको कुरा गर्ने अधिकार छैन । त्यो भन्दा विवादास्पद र नियमित विपरित काम अरु हुन सक्दैन ।
वर्तमान सरकारले मुख्य चारवटा काम गर्न खोजेको थियो । संविधान निर्माणका लागि कानुनहरु निर्माण गर्दै थियो । २ सय वटा कानुन निर्माण भइसके, पौने दुइ सय कानुनको मस्यौदा तयार थियो । अर्को भुकम्प पछिको पुननिर्माण हो । पुननिर्माणको सवालमा केही ढिला भएकै हो । ढिला हुनुको कारण पनि खोज्न जरुरी छ । त्यसै वर्तमान सरकारले गरेन मात्रै भनेर हुदैन । हिजो विश्व बैंकसंगको सम्झौता गर्ने समयमा कांग्रेस नेतृत्वका अर्थमन्त्रीले गरेको सम्झौताका कारण भएको ढिलाईलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन । नयाँ तथ्यांक संकलन र प्रमाणित गरी ४ किस्तामा दिने सम्झौता आफुले गर्ने अनि अरुले गरेनन् भन्नुको तुक छैन । कानुन निर्माण गर्दा धर्ना बसेर पुुननिर्माण प्राधिकरणको उपाध्यक्षमा बस्ने अनि सरकारलाई सबै दोष लगाउने कामले अर्थ राख्दैन । नेतृत्व खोज्ने अनि जिम्मेवारी पुरा नगर्ने र दोष अरुलाई दिने काम बन्द गर्नु पर्छ । वर्तमान सरकारले ४ लाई ३ किस्तामा झा¥यो, तर विश्व बैंक मानिरहेको छैन, त्यसको जवाफदेहिता कांग्रेसले लिनु पर्छ कि पर्दैन ।
वर्तमान सरकारका बारेमा अरु धेरै सकारात्मक कुरा हुदा हुदै पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । नाकाबन्दी र त्यसपछि पनि हुने गरेको आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कस्को थियो । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने गृहमन्त्रालय हो, त्यसको जिम्मेवारी कस्को थियो ? त्यसको नेतृत्वको हिसावले माओवादी केन्द्र जवाफदेही हुने की नहुने ? यस विषयमा पनि बहस जरुरी छ । जसले कमजोरी ग¥यो, जसको जिम्मेवारी थियो उसैले सरकारका कमजोरी देखाएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचलन पनि विचित्रकै छ ।
संसदमा आर्थिक अध्यादेश माथिको छलफल रोकियो । विनियोजित विधेयक पारित भइसकेपछि राष्ट्र ऋण उठाउने, राजस्व संकलन लगायतका लागि आर्थिक विधेयक छलफल हुने क्रममा कार्यसूची नै तलमाथि गरियो । सभामुखले आफ्नो पदको मर्यादा विपरित अविश्वास प्रस्ताव कुरेर बस्नु भयो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजिनामा नदिए विधेयक फेल गराउने धम्की माओवादी केन्द्रले दिन थाल्यो । सभामुख माओवादी केन्द्रको इशारामा चल्नु भयो । हामीले फेल गराउने भए गराउनुस भनेर चुनौती दियौ । आर्थिक अध्यादेश फेल भएको भए अर्को जेठ १५ कुर्नु पथ्र्यो भन्ने कुरा उहाहरुले पछि बुझ्नु भयो । हाम्रो जिम्माको विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको थियो, एमाले नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरतमा रहेको गठबन्धनले त्यो बीचमा कसरी शासन गथ्र्यो होला । सरकार बनाउने नाममा संविधान उल्लघन गर्न पाइदैन भन्ने कुरा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनले बुझ्न जरुरी छ ।
सरकार अल्पमतमा कि बहुमतमा छ भन्ने कुरा सभामुखलाई कसरी थाहा भयो । राजनीतिक दलले भन्न सक्छन्, हामीले यसरी बहुमत पु¥याएका छौ, सरकार अल्पमतमा प¥यो भनेर । तर सभामुखले त संसदमा मतदान गराउनु पर्ने होला नि ? माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भनेको आधारलाई मानेर त्यही व्यवहार गर्न त पाइदैन होला । सभामुख निर्वाचित भैसकेपछि त्यो पद गैरदलीय हुन्छ र सभामुखले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । सभामुख संवैधानिक भाषा बोल्न छोडेर दलीय भाषा बोल्न थाल्नु भएको छ । हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौ, आर्थिक अध्यादेश माथिको छलफल गरेपछि मात्रै अरु छलफल हुन्छ । मलाई विश्वास छ, सभामुखले सच्याएर आर्थिक अध्यादेशको प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु हुनेछ ।
संविधानको भाषाले अर्को सरकार खोजेकै छैन । राजनीतिक दलहरु सहमति हुदा जे पनि हुने अवस्थामा रहन्छन् र त्यतिबेलाको स्प्रिट सुशिल कोइराला राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री, माओवादीलाई सभामुख दिने गरी सहमति भयो र ०७४ माघभित्र सबै निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने स्प्रिट थियो । सहमति हुदाँ अर्को प्रधानमन्त्री आवश्यक ठानिएन, अहिले विवाद भएपछि खोजी भएको छ । संविधानको धारण २९८ लाई राम्रोसंग अध्ययन गर्नुस, कहाँ चाही अर्को सरकारको खोजी गरिएको छ । संविधानमा नलेखी सरकार बनाउन खोजे गलत हुन्छ । यसको अर्थ एमाले अल्पमतको सरकार चलाइरहन चाहन्छ भन्ने होइन, लोकतन्त्र विधिबाट चल्छ, बेलायतको जस्तो कानुनबाट चल्ने संविधान हाम्रो होइन ।
कानुन व्यवसायीहरु पनि संविधानको व्याख्यामा विभाजित छन्, एकाथरी संविधानको प्राकृतिक व्याख्या गर्छन, म भन्छु हाम्रो संविधान प्राकृतिक नभएर हाइब्रिड हो । हामीले हाम्रो प्रणालीलाई हाइब्रिड आफै बनाएका हौ । संसदीय प्रणाली भन्दा अलि फरक किसिमको, स्थायी प्रकारको बनाउन हामीले खोजेका हौ । त्यही भएर अब निर्वाचन भएपछि २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था हामीले गरेका छौ, प्राकृतिक व्याख्या गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, के संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो गर्न मिल्छ ? २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेको त अल्पमतमा परे पनि त्यही सरकारले शासन गर्छ भनेको होइन र ? अनि कसरी भयो त यो प्राकृतिक । यो आर्गनिक हो की हाइब्रिड ?
संविधानमा जे छ, त्यही गर्ने भन्ने हो भने अर्को सरकार संभव छैन । तर एमाले यो मान्यतामा रहदैन । एमाले लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध दल हो यसर्थ हामीले संविधान भित्रबाट निकास खोजौ भनेका छौ । प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि गठबन्धन गरेको दलका प्रमुख नेताहरुलाई बोलाएर भनि सक्नु भएको छ, अबको बाटो सहमतिको हो, सहमतिका लागि म तयार छु, टक्कर गरेर जाने हो भने हेरौ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनि सक्नु भएको अवस्था छ ।
अबको विकल्प ३ वटा हुन सक्छन् । पहिलो संविधान संशोधन गरेर । दलहरुबीच सहमति भयो भने संशोधन गरेर अर्को सरकारको व्यवस्था गरी सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ । दोस्रो बाधा अड्काउ फुकाएर, त्यसका लागि केपी ओलीले प्रस्ताव लैजानु पर्छ, केपी ओलीसंग टक्कर गरेर हुदैन । तेस्रो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । यि विकल्प मध्ये कुन राम्रो हुन्छ दलहरुले सोच्नु पर्दछ ।
अबको बाटो सहमति नै हो र केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ, सहमति गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौ, संसदलाई द्वन्द्वको थलो नबनाऔ भनेर । धु्रविकरण गर्न खोजेको हो भने एमाले तयार छ भनेर पार्टीको अध्यक्ष समेत रहनु भएका केपी ओलीले भनेको अवस्था छ । त्यसकारण माओवादी कांग्रेस गठबन्धनले ध्रुविकरण की सहमति रोज्नु पर्छ ।
अब सत्ता भन्दा पनि एजेण्डामा सहमति आवश्यक छ । हामीलाई सरकारको नेतृत्व चाहिएन तर ४ वटा कुरामा सहमति हुन्छ भने हामी बाहिरै बसेर भएपनि संविधान कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न तयार छौ ।
पहिलो संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिद्धता र कार्यान्वयन हुनु प¥यो, दोस्रो १६ बुदे सहमति पछि दलहरुबीचको राष्ट्रियता सम्बन्धी भएका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनु प-यो कसैको पछि लाग्ने मानसिकता त्याग्नु प¥यो, तेस्रो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका बारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत बनेको सोंचलाई स्थापित गर्न प्रतिवद्ध रहनु प¥यो । चौथो केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत र चीन भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु प¥यो । वर्तमान सरकार चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने आरोप छ, तर यथार्थ यस्तो होइन, वर्तमान सरकारले भारत र चीनसंगको सम्बन्धलाई समदुरीमा राखेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले कलकत्ता बाहेकको बन्दरगाह प्रयोग, विगतमा भएका सन्धी सम्झौताहरुको पुनरावलोकन लगायतका लागि प्रवुद्ध समुह गठन र छलफल लगायत महत्वपूर्ण कार्यको शुभारम्भ गर्नु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने हो भने सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
शासन त संख्याले गर्ने हो, हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि सरकार परिवर्तनका लागि एमालेले नै पहल कदमी गर्छ तर त्यसका लागि सहमति आवश्यक छ । एमाले बिना नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने सोच नराख्दा हुन्छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भद्र सहमति गोयवल्स शैली हो । ९ बुदे सहमति बन्ने समयमा ३ बुदेको प्रसंग आएको हो तर त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा बुढाबुढीलाई नाती नातिना हेर्ने रहर हुन्छ भन्ने हिसावले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको ठानेर म्यादी सरकारको नेतृत्व गर्न भनेको हो भने आजै राजिनामा गर्छु भनेपछि प्रचण्डले मैले त केपी ओली मान्नु हुन्न नलैजाउ भनेको साथीहरुले मान्नु भएन भनेर भन्नु भएको थियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ भद्र सहमतिको कुरा ।
हामी माओवादी र कांग्रेस दुवैको नेतृत्वमा सरकारमा बस्यौ, प्रचण्डको नेतृत्व, सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा बस्दा सरकार लोकप्रिय हुन सकेन । नेतृत्व पनि केही चिज हो भन्ने कुरा केपी ओलीले नेतृत्व गर्दा देखिएको छ । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने अवस्थामा वा लोकप्रिय काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी प्रतिपक्षमा नै बसेर जनताको वीचमा जान्छौ ।
वर्तमान सरकारका विरुद्ध बनेको गठनबन्धनले मंसिरमा निर्वाचन गर्दैन, यो गठबन्धन जसले बनाएको हो, यसले निर्वाचन चाहिरहेको छैन, चैतपछि यो गठबन्धनमा खटपट शुरु हुन्छ । त्यसैले हामी प्रतिपक्षमै बसेर जनताका बीचमा गएर जनमत बुझ्न तयार छौ । सत्ताका लागि संविधानलाई बन्धक बनाउन हामी चाहदैनौ ।
(प्रेस चौतारी नेपाल, बागलुङले २०७३ साउन ५ गते बागलुङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सार संक्षेप )
प्रस्तुती-रामबहादुर जि.सी	।
Next Postकालीगण्डकी करिडोर : पाण्डाखोला पुल निर्माणमा चरम लापर्बाही !